बच्चाहरु र किशोरहरु को मीडिया उपयोग र मीडिया साक्षरता
मिडिया साक्षरता | मिडिया इन्टरनेट स्मार्टफोन
मिडिया प्रयोगको साथमा र बच्चाहरु लाई प्रतिबिम्बित गर्दछ
नेटमा फसेको - आमाबाबुले कसरी आफ्ना छोराछोरीलाई साक्षरता साक्षरताको साथ सुरक्षित गर्न सक्छन्
आफ्नै मीडिया क्षमता र प्रस्ताव प्रस्तावहरूको साथ एक भूमिका मोडेल बन्नुहोस्
पुस्तकहरू, इन्टरनेट र मिडियाको बारेमा थप पृष्ठहरू
बालबालिका छोराछोरीलाई बिहान बिहान6बजे बस्दै बालबालिकाका छोराछोरीले आफ्ना स्मार्टफोनहरू कक्षाको समयमा खेलिरहेका छन् र किशोरीहरू जसको जीवन मात्र सामाजिक सञ्जाल हुन्: यी परिदृश्यहरू टाढा छैनन्, तिनीहरू वास्तविकता हुन्।
फ्लाइट र लत बीचको बीचमा बच्चा र किशोरहरूमा साक्षरता मिडिया साक्षरता
हाल अध्ययन अनुसार, तीन छ गर्न वर्ष को बच्चाहरु को बहुमत नियमित छ र एघार वर्ष बीच बच्चाहरु को प्रतिशत सम्म थप 30 भन्दा छ आफ्नै स्मार्टफोन, लगभग 20 प्रतिशत पनि आफ्नै पीसी वा ल्यापटप छ देखिन्छ। प्रवृति स्पष्ट रूपमा बढ्दै गएको छ। अत्यधिक र अनुपयुक्त मीडिया उपभोग को खतरा राम्रो तरिकाले ज्ञात छ। तर आमाबाबुले कहिलेकाहीं के गर्न सक्छन् जब स्कूलले छोराछोरीलाई इन्टरनेटको प्रयोग गर्न जानकारी दिन्छ र साथीहरूको दबाब बढ्दै जान्छ?
पहिलो इलेक्ट्रोनिक माध्यम जसको छोराछोरीलाई सम्पर्कमा आउन प्राय: टेलिभिजन हुन्छ। यो कम से कम छैन किनकी त्यहाँ धेरै टिभि स्टेशनहरू जसले धेरै जवान दर्शकहरूलाई विशेष गरी इनामदायी लक्षित समूहको रूपमा विशेष बनाएको छ। अर्कोतर्फ, छोराछोरीले आमाबाबुको प्रयोगका उदाहरणहरू हेर्छन्। मूलतः, यो राम्रो हुनेछ यदि छ वर्ष उमेरका बच्चाहरु लाई टिभि देखिएन भने सबै भन्दा राम्रो थिएन।
बच्चा र किशोरका लागि मिडिया साक्षरता
समस्या यो छ कि शिशुहरूले कथा र वास्तविकताको बीचमा भिन्नता गर्दैनन्। हानिकारक कार्यक्रमहरू समेत संवेदनशील बच्चाहरू बीच डरलाग्दो हुन सक्छ, जुन अक्सर रातोपूर्वामा आफूलाई देखाउँदछ वा हानिको डर। यसको अतिरिक्त, धेरै समय बिताउने बच्चाहरू टिभी हेर्न निष्क्रिय छन्, साथीहरू भन्दा कम सिक्नुहोस्, खेल र स्व-रोजगार। केही कुराको लागि यो यसो भन्छ: "गरेर सिक्न।" तथापि, विशेष गरी धेरै परिवारमा परिवारमा, पूर्वस्कूलका बच्चाहरूलाई पूर्णतया टेलिभिजनमा रोक लगाउन असम्भव छ। यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ कि बालबालिकाहरू एक्लै छोटो टिभिको अगाडि मात्र बाँकी छैनन्।
ई-बुक "कसरी प्रभाव पार्ने हो?" नि: शुल्कका लागि
टीभी एक दाई छैन। आमाबाबुले उनीहरुलाई आफ्नो बच्चाहरु संग झल्काउनका लागी प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ जुन उनीहरूले के देख्छन् र सोध्छन्, "तिमीले के देखे? तपाईं यसको बारे कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? "यसले बच्चाहरूलाई ठीकसँग वर्गीकृत गर्न र सामग्री प्रशोधन गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, यो महत्त्वपूर्ण छ कि टेलिभिजनको प्रयोग इनाम वा सजावटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। अन्यथा, टिभीले आमाबाबुको व्यवहारले धेरै महत्त्व दिएको छ, र बच्चा मानिन्छ कि यो टेलिभिजन हेर्ने बिना जीवन बिताउन सक्दैन।
इन्टरनेट धेरै केटाकेटी र किशोरीहरू जस्तै डिजिटल साहसिक खेल मैदानमा देखिन्छ। कुनै पनि संदेह छैन कि वर्ल्ड वाइड वेबमा अनगिन्ती फाइदाहरू छन् र यसले इन्टरनेटलाई राजनितिक बनाउन र आफनो बच्चालाई त्यसबाट टाढा राख्नको लागि कुनै अर्थ राख्दैन।
इन्टरनेट, टेलिभिजन र स्मार्टफोनको संयोजनले यसलाई धेरै गाह्रो बनाउँछ
यद्यपि, खतराको दुई स्रोतहरू छन् जसले आमाबाबुको बारेमा जान्नुपर्छ। पहिलो सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन गेम वा भर्चुअल किनमेल पोर्टलहरूको माध्यमबाट वास्तविकताको झन्डै हानि हो। यी प्रस्तावहरूको लत क्षमता निकै ठूलो छ। नेट को गुमनाम सम्भव बनाउँछ - अर्कोतर्फ, इन्टरनेट धेरै प्रयोगकर्ताहरू इच्छामा revelers, अपमान वा खतरामा पार्न सक्छ जो परिणाम को डर बिना कानुनी निर्वात लागि हो।
ती सबै बच्चाहरूलाई जान्न आवश्यक छ - यसले खतराहरूलाई कम गर्न वा तिनीहरूलाई चुस्त गर्न मद्दत गर्दैन। प्राथमिक विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिलेसम्म इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्दछ जब वयस्क नजिकै छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूलाई प्रभावकारी र उद्देश्यपूर्वक सञ्जाल प्रयोग गर्न जान्नको लागि अनुकूल प्राप्त गर्नका लागि जानकारी प्राप्त गर्ने सम्भावनाहरू। युवाहरूको लागि आदर्श वाक्य हो: नियन्त्रण राम्रो छ, विश्वास राम्रो छ। आमाबाबुले आफ्ना किशोरहरूलाई राम्रो लिङ्क राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ, भित्ता भए तापनि। त्यसपछि मात्र उनीहरूले बच्चालाई भ्रमको संसारमा भाग्नु भएमा समयमा ध्यान दिन्छन् वा इन्टरनेटमा साइबरब्लाइङ वा यौन हिंसाको शिकार हुन्छ।
मेरो बच्चाले कति सहन सक्छ?
बच्चाहरु को बालबालिका र प्राथमिक विद्यालय उमेर मा अझै पनि आफ्नो आमाबाबु को तिर दृढ अभिमुख हो। यो पनि मिडियाको हस्तान्तरणमा लागू हुन्छ। मात्र थपियो मूल्य संग कार्यक्रम चयन हेरे र, किनभने तिनीहरूले पढ्न आफ्नो स्मार्टफोन गर्न सजग phased उदाहरणका लागि जोगिन गर्ने आमा र बाबु, एक पुस्तक वा अखबार वा परिवारका साथ केही गर्न चाहन्छु, बच्चाहरु को लागि सकारात्मक भूमिका मोडेल छन्। त्यो मनोवृत्ति छोराछोरीको लागि स्पष्ट संकेत हो र तिनीहरूले वास्तविकता र यस्तो परिवार, मित्रता, मनमा स्वतन्त्रता र रचनात्मकता रूपमा केही मान गुमाउनु छैन भन्ने सुनिश्चित: बस देख "बन्द गर्नुहोस्" र साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुराहरूको हेरविचार। मिडिया खपत गर्ने बोल्न passivity मा परेका बच्चाहरु - साधारण खेल, यात्रा, खेलकुद, मित्र बैठक तथापि, तिनीहरूले कसरी सुन्दर सक्रिय आफ्नै जीवन र प्रभाव कोर्न सक्षम हुन सक्छ सजग छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न।
पुस्तक र पढाई
बच्चाहरु को किताबहरु को बारे मा र जोर देखि पढने को बारे मा
हैरी पोटर को आकर्षण
छोराछोरीलाई किन पढ्न महत्त्वपूर्ण छ?
अलि पढ्न - भाषाको गेटवे
मिडिया र इन्टरनेट
Sexting - इन्टरनेटबाट खतरा
बच्चाहरूको टिभि खपत
बच्चाहरु इन्जिन खोज
इन्टरनेट र ल्याप्टप beginners को लागि
बच्चाहरुका लागि छोटो कथाहरु
एवलिनको पहिलो छुट्टी
एक आश्चर्य को रूप मा एक पालतू जनावर
विद्यालयको पहिलो दिन नयाँ शहरमा
फुटबल र हार
पहिलो उपस्थिति पहिले स्टेज भय
लिली र हराएको हरियो टेडी भालू
कविता के हुन्?
के उद्धरणहरू छन्?
डाउनलोडको लागि कथा क्विज
मित्र पुस्तकहरूको लागि राम्रो कुराहरु
के अहिले इन्टरनेट टूटेको छ?